Nhau - Sports Apparel
Pfupiso yezvipfeko zvemitambo
Maererano nemaitiro emitambo yakasiyana-siyana, mitemo, vatambi uye zvimwe zvinhu, pamwe chete nekugadzirisa zvinodiwa zvezvipfeko zvemitambo uye zvinhu zvekushongedza zvine chokuita. Kusanganisira zvipfeko, shangu, hati, masokisi, magirovhosi, machira, mabhegi, midziyo yebvudzi, zvishongo, maamburera zvichingodaro. Zvipfeko zvemitambo zvine marudzi akasiyana-siyana, uye kubva muzana remakore rechi19 kusvika kuzana remakore rechi21, nemhando dzakasiyana-siyana, hupenyu hwezuva nezuva ndechimwe chezvinodiwa.
Zita reChinese, Sportswear, Pinyin Yundongfushi zita rekunze reSportwear, Sportswear, Pinyin Yundong Fushi, chirungu sportswear zvinoenderana nehunhu hwemitambo yakasiyana-siyana, mitemo yemakwikwi, vatambi chimiro chemuviri uye zvimwe zvinhu pamwe nekugonesa kukwikwidza zvinodiwa uye kugadzirwa kwembatya uye zvine chekuita nekushongedza. zvinhu. Kusanganisira, zvipfeko, shangu, hati, masokisi, magirovhosi, machira, mabhegi, midziyo yebvudzi, zvishongo, maamburera zvichingodaro.
Kupeta zvinoenderana nechinangwa, zvipfeko zvemitambo zvevaraidzo, zvinoshandiswa sezvipfeko zvemitambo zvenguva dzose, zvinogona kupa muchengeti chiedza uye kunzwa kunofadza. Zvipfeko zvemitambo zveAmateur, chipfeko, chakadai sevhesi, zvikabudura, kana kuti manyatera, zvakagadzirirwa zvinodikanwa zvokunyama zvavanhu vanoda mitambo. Professional Sportswear, zvipfeko zvakagadzirirwa chaizvo mutambo, wakadai senhabvu, Yoga, basketball, zvipfeko zvekunze zvemitambo, nezvimwe. Kupeta nemasikirwo, kufamba kweVölkisch, kwakakodzera ruzhinji rwevanhu vakapfeka zvipfeko zvemitambo, kushanda kwakawanda. Mafashoni Mitambo, akakodzera kutsvaga fashoni yekucheka-kumucheto fashoni varume nevakadzi, kuti zvipfeko zvemitambo zvipfeke fashoni yakawanda, uye zvino tungamira maitiro.
Munguva dzekare, apo vanhu vanotora chikamu mumitambo vanopfeka zvipfeko zvinoshandiswa muhupenyu hwezuva nezuva, kungoitira kurerukira kwezviitiko, dzimwe nguva vaipeta maoko nemakumbo etirauzi. Mushure mekuita mutambo wemitambo wepamutemo, zvishoma nezvishoma zvakaonekwa zvipfeko zvemitambo. Munguva yechirimo neMatsutso uye nguva yeWarring States, China yaive neyayo zvipfeko zvekupfura. Apo varwi vehondo vaidzidzira martial arts munguva dzakapfuura, vazhinji vavo vaipfeka zvipfeko zvakakosha. Apo mitambo yemazuva ano yakatanga kutangwa pakupera kwezana remakore rechi19, China yakanga isina zvipfeko zvemitambo zvaienderana nayo. Muna 1902, pane mumwe wemitambo yapakuvamba zvikurusa yakaitwa muTianjin, vatambi vanopfeka zvipfeko zvenguva dzose: vamwe vanopfeka zvipfeko zvikuru uye zvakakora, asi mabhurugwa mapfupi; vamwe vanopfeka zvikabudura kana zvikabudura pamwechete. Mushure meMitambo yeNyika ya1914, zvakasarudzwa kuti vatambi vanofanira kupfeka matangi epamusoro uye zvikabudura pavanokwikwidza mumakwikwi epamutemo. Kana vari vakadzi vatambi vakapfeka matangi epamusoro uye zvikabudura, zvakangoitika kubva kumitambo yenyika ye1930.
Mitambo mizhinji nyika dzakasimukira pasi rose, inokoshesa zvikuru kudzidza kwezvipfeko zvemitambo. Zvipfeko Zvinodiwa Chiedza, kuvhara-kukodzera, kupfava, kushanduka-shanduka, kuitira kutamba unyanzvi hwemitambo yemitambo, yakanaka uye ine rupo maitiro. Germany, Japan, United States nemimwe zvipfeko zvemitambo, zvipfeko zveDanish hockey, France nedzimwe nyika zvipfeko zvekukwira makomo, masutu ekushambira muAustralia, vane zvakanakira uye maitiro. China yaimbove nemafekitari mashoma aigadzira zvipfeko zvemitambo, mashoma mukubuda uye mashoma akasiyana. Mushure mekutanga mhemberero yePeople's Republic of China, kugadzirwa kwezvipfeko zvemitambo kwakakura nekukurumidza. Ikozvino China yave kukwanisa kugadzira zvakakodzera kune dzakasiyana siyana zvipfeko zvemitambo, mukugadzirwa kunogona kuzadzisa zvinodiwa pamusika wepamba. Shanghai, Tianjin, Qingdao nedzimwe nzvimbo dzinogadzira zvipfeko zvemitambo zvemhando yakanaka, zvimwe zvasvika padanho repamusoro repasi, zvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinotengeswa kune dzimwe nyika dzakawanda pasi rose.
Kune vangangove vavariro dzevatengi, kuti brand iri mumoyo yevatengi itore nzvimbo, uye iripo chokwadi chine chekuita neyakasiyana uye pfungwa yekukosha. Runako rwemhando yezvipfeko, unogona kunakidzwa nezvakawanda zvembatya zvakajairika hauna mabhenefiti: mumwe munhu akamboti "brand ndiyo inotakura kukosha. “. Nyika yezvemari, BCG kuongororwa kwe10 inonyanya kukosha yeAmerican apparel brands, tinogona kunzwisisa kuti izvi zvinonyatsozivikanwa, zvinobudirira zvipfeko zvebhuku kukosha kwebhuku rakakwirira zvakanyanya kudarika kutengeswa kwayo kwemusika. Zvinoenderana nekuvandudzwa kweiyo Brand kuvimbika manera, mhando yezvipfeko kuti ive nevatengi vakavimbika, vatengi vanofanirwa kutanga vasiya mhando sehama, shamwari dzinoda.
Black Shorts, Sport Suit Men, Grey Yoga Pants Chipfeko, Mens Wool Vests, Biker Shorts Vakadzi, Hot Yoga Pants Outfits,